Sheeg BILAASH Khudaarta Cagaaran ee Bilaashka Ah Kaliya Bixiso S&H - Taakulada Tayada
Bogga ugu weyn » Freebies » Sheeg BILAASH Khudaarta Cagaaran ee Bilaashka Ah Kaliya Bixi S&H
Sheeg BILAASH Khudaarta Cagaaran ee Bilaashka Ah Kaliya Bixi S&H
Wakhti xaddidan kaliya saaxiibadayada Top Healthiness waxay bixiyaan a Shirkada Xayawaanka ah ee Khudradda BILAASH ah waa inaad kaliya bixisaa maraakiibta iyo maareynta. Taabashadan khudradda dufanku waa mid cabsi badan, sababtoo ah waxaad u rogi kartaa khudaarta nuudaha.
Shaatiinka khudradda waxaa lagu dhajiyaa 100% tayo sare leh oo tayo sare leh oo BPA-BILAASH AH ah iyo bir aan qummanayn. Waxaad u isticmaali kartaa zucchini, squash, karootada, qajaar, baradhada macaan iyo wax ka badan. Iyada oo qalab this qabow waxaad ka dhigi kartaa salads midab leh, walaaq-baradho, iyo qurxiyo. Shaatiinka khudradda ayaa u fiican dadka Paleo, Gluten-free, Low-carb iyo cuntada caanaha cuntada.
Sidoo kale waxaa ku jira shredder khudradda khudradda bilaash ah waa buugaagta lacag la'aanta ah ee 3
Bonus 1: Cuntooyinka Zoodle ee Caafimaadka leh iyo nafaqo leh
Buug-gacmeedkan, waxaad ka heli doontaa cunnooyinka khudradda udgoon ee khudradda leh oo qof kasta oo qoyskaaga ka mid ahi jeclaan doono.
Bonus 2: Cadaadiska Dhiiga Dhiigga
Buugga Ebook ee Cadaadiska Cadaadiska Dhiigga waxaa qoray Amanda Ashley oo ah macallinka Yoga, Chef iyo Nafaqeeye. Waxay u qortay buugan inay ka caawiso dadka halgan kula jira dhiig karka. Faahfaahinta ku jirta buugan ayaa kaa caawin doonta inaad maareyso oo aad xakameyso cadaadiska dhiiggaaga, adiga oo aan daawo u qorin sidoo kale waxay kaa caawin doontaa inaad miisaankaaga dhinto.
Bonus 3: 15 Cunto Khafiifinta Miisaanka Cuntada
EBookkan waxaa ku jira 15 miisaan caafimaad leh oo caafimaad leh oo lumis ah
Gaadiidka shaandheerka loo yaqaan 'Spiral Vegetable Cutter' ayaa ku socda $ 9.95. Fadlan u ogolow maalmaha 21-30 si aad u bixiso amarkaaga. Riix hoose si aad u hesho faahfaahin dheeraada oo ku saabsan dalabkan bilaashka ah
Riix Halkan si aad maanta uga heshid Ballanqaadka! Heshiiska khudradeed ee caleenta jaban wuxuu ku ansaxmaa inta alaabtu socoto.
Fadlan Xusuusnow: Spiral Khudaarta Dhirta waxaa boostada laguugu soo dirayaa adiga, saddexda buug ee kale ee gunnada ah waa eBooks dijitaal ah waxaana lagu siinayaa isla markiiba marin toos ah oo internetka ah, sidaa darteed waxaad bilaabi kartaa akhriska ama dhageysiga buugaagta isla markiiba! (Buugaagtan eBooks-ka ah looma raro jir ahaan mana heli doontid nuqulo jir ahaaneed oo dhab ah)
Waxaad soo iibsataa 1 Lacagta Xamuulka Turutoyinka Laga Helo!
10 Isticmaalidda Ammaanka Coconut Oil eBook oo bilaash ah